Karohina i Arizaka Rabekoto Raoul, filohan’ny Federasiona malagasy ny baolina kitra. Manamafy izany ny taratasy filazana fikarohana laharana faha-001-20/BIANCO/DG/DTA navoakan’ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly androany alarobia 26 febroary 2020. Nandefasan’ny Bianco fiantsoana voalohany ity Tale jeneralin’ny Cnaps teo aloha ity tamin’ny 20 febroary 2020 hatao famotorana mikasika vola amina lavitrisa tao amin’ny Cnaps izay tsy mazava ny nivoahany, fa tsy nipoitra izy, raha toa ka tonga niatrika famotorana ireo olona voarohirohy miaraka aminy. Nandefa fiantsoana fanindroany ny Bianco no mivoaka an-gazety ny vaovao fa niala teto Madagasikara i Arizaka Rabekoto Raoul, ary izay no voalaza fa namoahan’ny Bianco ny « Avis de recherche » hikarohana azy hanaovana famotorana azy ka hamaliany eo anoloan’ny fitsarana ireo fiampangana azy. Araka ny fantatra dia ny Bianco no nangataka tamin’ny ministeran’ny Ati-tany ny hamoahana fepetra tsy fahafahana mivoaka an’i Madagasikara araka ny taratasy laharana faha-019/MID/SG/DGAT/DIE/SCM tamin’ny 3 febroary 2020, mihatra amin’i Arizaka Rabekoto Raoul.
mercredi, 26 février 2020 11:29
Fandrobana ny Ivon-ketra Antsirabe: Olona miisa fito tazomina am-ponja, mpiambina ny telo sy vadin'ny mpiambina iray, mpiasa ny telo
Olona miisa fito no natolotra ny Fitsarana ambaratonga voalohany Antsirabe omaly, voarohirohy tamin’ny fahavakisan’ny Ivon-ketra-A Antsirabe, ka nahaverezana vola manodidina ny 50 tapitrisa Ariary ny alin’ny 14 febroary hifoha 15 febroary 2020. Mpiambina ny roalahy tamin’ireo voarohirohy, mpiambina efa niasa tao teo aloha ny fahatelo, ary vadin’ny iray tamin’ireo mpiambina ny vehivavy iray voasambotra sy notanana am-ponja vonjimaika aloha hatreto. Misy mpiasa, mpikirakira vola miisa telo ihany koa voarohirohy miaraka amin’izy ireo, ary samy notazomina am-ponja vonjimaika avokoa, miandry ny fotoam-pitsarana azy ireo.
Mpamily Taxi Bajaj iray no voatsatoka antsy nataon’ny namany samy mpamily ny zoma lasa teo iny teto Bel Souvenir. Nidina tety hifotony ny avy amin’ny Polisim-pirenena nijery sy nanao fanadihadiana momba ity tranga ity. Ny manodidina teo no nahita ireo nifanenjika fa tsy fantatra ny antony fa ny teny hoe : aloavy ny volako ...no heno tao anaty fifamalina nisy tamin'izy ireo. Nentin’ny Polisy teo amin'ny biraon’ny kaomisaria ny Taxi Bajaj iray, izay efa tsy nahitana batery intsony nandritra ny fitsirihana natao. Nilaza ilay mpamily nahavanon-doza fa : ''tsy tongatonga ho azy izao fa noho fivadiham-pitokisana nisy teo aminay roa satria nanao bizina izahay ka nivarotra ''Big Boss 90 degré'' tamin'ny 300 000Ar ny iray ka 100 000 Ar isaky ny fitaovana lafo kanjo hatramin'izao dia tsy azo ny vola ka izao no niafarany ». Eo ampelan-tanan’ny Polisy ny raharaha, manohy ny fanadihadiana. (Jereo sary Tohiny)